Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Sheekadeena Jaceyl ee Jasiiradaha quruxda badan ee Seychelles
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Khabiirkii hore ee ku takhasusay dalxiiska, Roger Porter-Butler, iyo xaaskiisa, Joan, waxay dib u booqdeen xusuushoodii ugu xiisaha badnaa ee Seychelles, geeskooda yar ee janno ilaa 2011.
Sannadkii 1978-kii markii dalxiisku ku cusbaa badweynta Hindiya, Roger waxaa isla markiiba soo jiitay jasiiradaha quruxda badan ee Seychelles
Wuxuu naftiisa u ballan qaaday inuu soo laaban doono si uu ugu soo lugeeyo xeebta cidlada ah ee Anse Lazio ee ku taal Praslin.
Ma noqon laheyn ilaa 2011 inuu la laaban doono xaaskiisa 10 sano kadib markay isqabeen.
Roger iyo Joan Porter-Butler, oo ah lamaane hawlgab ah oo reer Britain ah, ayaa la kulmay koox ka socota Seychelles galabnimadii Arbacada.
Kulankan, oo lagu qabtay khadka tooska ah ee loo yaqaan 'zoom platform', qadarintiisa COVID-19 iyo xayiraadaha socdaalkeeda, wuxuu ka mid ahaa kuwa hal mar nolosha la kulmay, iyadoo lagu daabulayo qorayaasha sheekada jacaylka quruxda badan ee Porter-Butlers iyo Seychelles.
Roger wuxuu ka sheekeeyay markii ugu horeysay xusuusta Seychelles dib 1978 markii dalxiisku ku cusbaa badweynta Hindiya - garoonka diyaaradaha oo la furay 1972. Roger wuxuu si aad u qiiro leh u xasuustay inuu soo jiitay xaalada bikranimada ee jasiiradaha quruxda badan isla markaana uu si gaar ah u fajaciyay Anse Lazio oo leh budo jilicsan. ciidda lagu qaabeeyey iyadoo lagu soo rogayo dhagxaan dhagax adag.
Booqashadeydii ugu horeysay ee aan ku imaado Seychelles waxay qaadatay 2 todobaad waxaanan ku faraxsanahay inaan joogo meel aad u qurux badan, gaar ahaan xeebta Anse Lazio ee ku taal Praslin maalin dhan. Taasi waa markii aan naftayda u ballanqaaday inaan ku noqon doono ku soco xeebtaan cidlada ah markale, ”ayuu yidhi Roger.
Intii aan ku jiray safarka safarka iyo u safridda adduunka, waxaan qalbigayga ku hayey xusuusta Seychelles oo aan jeclaa in aan soo laaban doono. ”
Sannadihii ayaa dhaafay laakiin Roger waligiis ma iloobin Seychelles, iyo 2011, toban sano ka dib markii uu guursaday xaaskiisa quruxda badan, Joan, wuxuu u kaxeeyay safar ku tagaya meesha noqon doonta mid ka mid ah meelaha ay jecel yihiin.
Lamaanayaashu waxay go'aansadeen inay ogaadaan la yaab kale oo Seychelles ah, oo ay u degeen waqtigan jasiiradda Ste Anne iyo intii ay safarka ku jireen, waxay u dabaaldegeen 10-kii sano ee ugu dambeysay ee xiriirkooda hudheelka afarta xilli ku yaallay Mahé.
Xusuusin, Roger iyo Joan waxay si kalgacal leh uga hadleen booqashadoodii Jasiiradda Moyenne, oo ah 24-hektar oo ka kooban qayb ka mid ah Beerta Qaranka ee Sainte Anne, halkaas oo ay kula kulmeen Brendon Grimshaw, oo ahaa tafatiraha hore ee wargayska Ingiriiska, oo isagu lahaa jasiiradda waqtigaas.
Mr Grimshaw wuxuu saxiixay buugiisa "Cagaar Sand" isagoo qoraal gaar ah ugu qoray lamaanaha isqaba oo mar kale ku casuumaya booqashooyinkooda mustaqbalka.